के तपाइलाई थाहा छ ? यस्तो बेला महिलालाई शा’रिरीक चा’हना बढी हुन्छ ! जानी राखौ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/के तपाइलाई थाहा छ ? यस्तो बेला महिलालाई शा’रिरीक चा’हना बढी हुन्छ ! जानी राखौ
एलियनका १२ वटा जहाज लाइन लागेर उडेको देखियो, बैज्ञानिक नै चकित ! (भिडियोसहित)
दुर्घटनामा परी खुट्टा गुम्यो तर पनि एक खुट्टाको बलमा बनिन् बडी बिल्डर (तस्विर सहित)